Dhagayso: Madaxda DFS & Culimada oo ku heshiiyay in Shabaab laga habaaro masaajidyada…
Madaxda DFS & Culimada Muqdisho ayaa ku heshiiyay in si wadajir ah loola dagaalamo Kooxda Shabaab kadib qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe. Dad ka badan
Warbixinta Bankiga Aduunka uu soo saaray ayaa waxa ay taabaneysaa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deganaanshiya la’aanta, Abaaraha soo noq noqday iyo
Dhageyso: DF Somalia Maxey ka tiri Doorashada Madaxweyaha Cusub ee Hirshabeelle….
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo dib uheshiisenta Dowlada Faderalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa U Hambalyeyey Madaxweynaha Cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo Maanta lagu doortay Magaalada Jowhar ...
Doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa lagu wadaa inay goor dhow ka bilaabato magaalada Jowhar, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. Guddiga doorashada Madaxweynaha ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jira in ...
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay shir ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya, kaasi oo loogu magac daray shirka Wadatashiga Guddiga Amniga Baarlamaanka iyo Wasaaradda Amniga Gudaha ...
Maalmahan warbaahintu waxa ay aad u hadal haysay "Ciidanka Badbaadinta Rohingya ee Arakan" oo ka dhaqdhaqaaqa gobolka Rakhine ee woqooyiga Myanmar. Ciidankaas oo ku dhawaaqay in uu u dagaalamayo difaaca dadka ...
Wasiirka Wasaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo Abiikar Nuur oo uu wehliyo la taliyaha Wasarrada xagga Caafimaadka taranka iyo dhallaanka Dr Abdulqadir Wehliye ayaa safar 2 casho ah oo shaqo ...
Beesha caalamka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda maamulka HirShabelle, kadib markii baarlamanka maamulkaasi uu sheegay inuu xilka ka qaaday madaxweyne Cali Cabdullaahi ...